Yepamusoro Salad Kupfeka Zvinongedzo zveremu Kurasikirwa - Fitness Rebates
musha » Blog » Zvepamusoro Salad Kupfeka Zvinongedzo zveremu Kuneta
Muchikamu chino, tiri kuzokurukura yakanakisa saradhi yekupfekedza zvigadzirwa zvekudzikisa uremu uye uye nekugovana matipi pane izvo zvigadzirwa zvaunogona kushandisa mumasadhi ako kubatsira kusimudzira metabolism.
Aya matipi anobva Metabolic Kubheka vanyori Dave Ruel & Karine Losier.
Heano hutano hwekupfeka salad hwaunogona kushandisa:
Yese Natural Dijon Mustard inogona chaizvo kukanganisa maitiro ako e-metabolic, kunyangwe pakuzorora, pamwe nekuvandudza kuwanda kwekudyara kwekudya uye kushandiswa kwemanyoka.
Apple Cider Vhiniga inobatsira nehuremu-kurasikirwa nekudzora chiropa, kuwedzera metabolic maitiro, uye kudzvinyirira nzara nzara!
Ichena uye Tsvuku Wine Vhiniga yakaratidzwa kuvandudza huwandu hweshuga yeropa, kuderedza insulin pamwe nekukurumidza kudya kwekudya.
Uye kana izvo zvanga zvisina kukwana, mamwe maruva uye zvinonhuwira zvakaita sejinja, gariki, ndimu, cayenne, thyme, basil, uye parsley zvakanyatso kuratidzwa kuve neakakosha metabolism-ekuwedzera zvivakwa sezvavanokurudzira kuravira kwako kubhuti!
Chokwadi ndechekuti, paunodzidza kubika nezvakakora svutugadzike, unogona kunyatsotanga kufara mune zvese mafuta anopisa mafuta uye nekupedzisira kunhuvira kwezvikafu zvaunoshandisa kukwenya chiuno.
Izvo chaizvo chaizvo izvo izvo Dave naKarine zvavakaungana muMetabolic Cooking akateedzana- anopfuura mazana maviri nemakumi mashanu anonaka, mafuta-anoparadza ndiro dzaunotora kubva. Uye zvakasikwa, ivo vane dzakasiyana siyana metabolism kusimbisa saladhi mapikicha kusarudza kubva!
Tarisa uone izvi:
250+ Savory Metabolic Kubika Dishes <——- Kurumidza & Nyore!
Pamusoro pekutevera chirongwa chekudya chine hutano, kurovedza muviri kwakakosha zvakare sa! Kana iwe ukaronga nezvekuita Cardio, kumhanya inzira huru yekupisa mafuta emuviri.
Vatambi vazhinji vanosanganisira vamhanyi vanoshandisa preworkout zvinowedzera kusimudzira masimba avo. Kana iwe uri kufunga nezvekushandisa preworkout yekuwedzera simba, ona mhedzisiro yekushanda-usati washanya
Tinovimba wakanakirwa nechinyorwa ichi! Tizivisei pfungwa dzenyu mune zvakataurwa pazasi